रोनाल्डोका वकिल भन्छन्- बलात्कार आरोपमा पेश गरिएका प्रमाणहरु झुटो हो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
रोनाल्डोका वकिल भन्छन्- बलात्कार आरोपमा पेश गरिएका प्रमाणहरु झुटो हो
अशोज २५ गते, २०७५ - ११:२७
यो वर्ष नै इटालियन क्लक युभेन्टस गएका पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोमाथि लागेको बलात्कार आरोपमा पेश गरिएका प्रमाणहरु झुटो भएको उनका वकिलले बताएका छन्।
३३ वर्षे रोनाल्डोले सन् २००९ मा अमेरिकाको लस भेगसमा आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै केही साता अगाडि काथरीनले नै खुलासा गरेकी थिइन्। भेगसको एक होटलमा रोनाल्डोले आफूमाथि बलात्कार गरेको भन्दै अन्तवार्ता दिएपछि उनी रातारात चर्चामा आएकी थिइन्।
तर रोनाल्डोका वकिलले काथरीनले बलात्कारका बारेमा पेश गरेको प्रमाणहरु फेक भएको दाबी गरेका छन्। ती महिलाले लगाएको बलात्कारको आरोप झुट रहेको र ती महिलाले आरोप दर्ता गर्ने क्रममा सबै झुटा कागजात बनाएको रोनाल्डोका वकिलले बताएका छन् ।
रोनाल्डो आफैंले पनि यो घटना झुटो भएको बताउदै आएका छन् । जर्मनीको एक पत्रिकाले छापेको अन्तवार्ता गलत भएको भन्दै रोनाल्डोले यसअघि नै आफ्नो भनाई राखिसकेका छन् ।
तर पनि उनी कानुनी रुपमा यसको समाधानका लागि दुई दिन अगाडी वकिलसँग भेट्न लिस्वन पुगेका थिए । सो भेटपछि पहिलो पटक रोनाल्डोका वकिल पिटर क्रिष्टिएन्सनले जारी गरेको वक्तव्यमा रोनाल्डोले सबै आरोप ‘स्पष्ट रुपले अस्वीकार गरेको र आरोप निकै घृणित रहेको’ उल्लेख गरिएको छ।
रोनाल्डोका वकिल क्रिष्टिएन्सनले आरोप सम्बन्धी खबर प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यम निकै गैरजिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेका छन् । चोरी गरिएको र सजिलै म्यानुपुलेट गर्न मिल्ने डिजिटल कागजातको भरमा आरोप लगाएको उनले बताएका छन् । यस्तै कागजातको महत्वपूर्ण भाग पूर्णरुपले परिवर्तन गरेर झुट बनाइएको रोनाल्डोका वकिलले बताएका छन् ।
३४ वर्षे काथरीनले लस भेगसको पुलिसमा आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै प्रमाणसहित रिपोर्ट फाइल गरेकी थिइन्। २०१० मा काथरीनलाई यो घटना लुकाउन पुलिसको संलग्नतामा तीन लाख ७५ हजार अमेरीकी डलर दिएको बताइएको छ। तर, रोनाल्डोका वकिलले यो सम्झौता भएको भए पनि बलात्कारका कारण भने नभएको बताएका छन् । एजेन्सी
अशोज २५ गते, २०७५ - ११:२७ मा प्रकाशित
काठमाण्डौं । केही सञ्चार माध्यमले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नै निवास खुमलटारमा गुतगट...
कहिले के भयो ? ९३६ देखि नेपालको राजनीतिक तथा एैतिहासिक घटनाक्रमको मिति हेर्नुहोस्
काठमाडौं । कहिले के भयो ? ९३६ देखि नेपालको राजनीतिक तथा एैतिहासिक घटनाक्रमको मिति याँहाहरुको सुविधाका...
प्रधानमन्त्रीको आदेश– चौधरीलाई नेल लगाएर उपचारमा लैजानेमाथि कारवाही गर
काठमाडौं । राजपा नेता तथा सांसद रेशम चौधरीलाई नेल लगाएर नै उपचार गरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री...
नेकपाको सचिवालय बैठक आज : १३ महिना थन्किएको दस्तावेजमाथि छलफल हुने
काठमाडौं । आज शनिबार बस्ने नेकपाको सचिवालयमा १३ महिनादेखि थन्किएको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने...
पोखरा पुगेर प्रचण्डले यस्तो गरे सरकार र मन्त्रीहरुको भविष्यवाणी
पोखरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन...
सुधिर शर्माको दावी –प्रम ओली एक्लिए, देखाए ४ कारण
काठमाडौं । कान्तिपुर दैनिकका पूर्व सम्पादक एंव पत्रकार सुधिर शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली...
तीन सय नब्बे कांग्रेस कार्यकर्ता नेकपामा प्रवेश
सुनसरी। नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी सुनसरीको इनरुवा वडा नम्बर १, ४ र ८ का ३९० जना नेकपामा प्रवेश गरेका...
काठमाडौं । राजनीतिमा के मात्रै हुँदैन ? पद र शक्तिको लागि आफ्ना दाजुभाइ समेत नभनिने राजनीतिमा आचार्य...
यी हुन् जनयुद्ध सुरु गर्ने तात्कालिन माओवादीका १९ नेता
काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले १० वर्षको भीषण सङ्घर्ष गरेर नेपाललाई राजनीति निकास दिएको छ ।...
काठमाडौं । लोकसेवा विज्ञापनविरुद्ध दायर भएका ४ वटै निवेदनमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ। मंगलबार लोकसेवा...
नेकपाको किसान महासंघले पूर्णता पायो (नामावलीसहित)
यसकारण असुरक्षितरुपमा गर्भपतन गर्न बाध्य छन् महिला
विपद् व्यवस्थापनको लागि गृहमन्त्रालय तयारी अवस्थामा छ – सचिव राई
एक्कासी आएको आँधीले त्रिपाल उडाउँदा राजस्थानमा १४ जनाको मृत्यु, ७० भन्दा बढि घाईते
ट्रम्पले दुई दिने दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्ने
चिनियाँ कम्पनीद्वारा निर्माणधीन भवन भग्नावशेषमा जीवित व्यक्ति नरहेको सेनाको दाबी
पढाउन नसक्ने शिक्षकले ठाउँ खाली गरिदिनुस्, नयाँ पुस्ता आउँछन् – शिक्षामन्त्री पोखरेल
सरकारले कोमामा रहेका सबै नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने
हास्यकलाकार ‘जिग्री’ र’पाँडे’द्वारा ८० वर्षीय तुईन चालक चेपाङलाई नयाँ घर हस्तान्तरण
तीव्र गति कारवाही अभियानमा ९४० चालक कारवाहीमा
७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, क्षतिको विवरण आउँन बाँकि
बाँदर आतंक समाधान गर्न स्याङ्जाका सांसदको माग
उडानका बेला निदाएकी महिला विमानभित्रै छुटेपछि…